वीरगंजमा ‘कर्फ्यू’, आजदेखि ४ दिनसम्म औषधि पसलबाहेक सबै ठप्प हुने ! सेयर गरौ «
वीरगंजमा ‘कर्फ्यू’, आजदेखि ४ दिनसम्म औषधि पसलबाहेक सबै ठप्प हुने ! सेयर गरौ
Published : 16 April, 2020 8:30 am
तीन जनामा कोभिड-१९ पोजेटिभ देखिँदापछि आजदेखि चार दिनका लागि वीरगंज सिल गरिएकाे छ । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले आजदेखि ४ दिनसम्मको लागि सिल गरिएकाे जानकारी दिनुभयाे । वीरगंजलाई सिलभन्दा पनि अधोषित ‘कफ्र्यू’नै गरिएकाे मेयर सरावगीकाे भनाइ छ ।
महानगरपालिका भित्र औषधि पसलबाहेकका सबै थोक बन्द(शिल) गर्ने मेयर सरावगीले बताउनुभयाे । लकडाउनको समयमा खाेलिरहेका खाधान्न लगायतका पसलहरु अब बन्द हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयाे । मेयर सरावगीले ४ दिनसम्म घरमा रहेको खाधान्न बाहेक महानगरपालि भित्रका नागरिकले हरियो साग सब्जी लिन समेत लिन बाहिर निस्कन नपाउँने बताउनुभयाे यस्ता समयमा विपन्न तथा गरिव परिवालाई अतिनै आवश्यक परे जानकारीको आधारमा उनीहरूको घरमै खाधान्न महानगर पुर्याउने पनि उहाँले बताउनुभयाे । कोही कसैलाई औषधी लिनुपर्दा समेत प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी मात्र बाहिर निस्कन पाउने मेयर सरावगीले जानकारी दिनुभयाे ।
मेयर सरावगीले प्रदेशमा एउटा मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमण परिक्षण गर्ने मेसिन भएकाे र विकल्पमा अर्को मेसिलको व्यवस्था गरी वीरगंजमा राख्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयाे । वीरगंजमा छुट्टै एउटा मेसिन हुनुपर्ने प्रदेश सरकारसँग माग गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उक्त मेसिनकाे व्यवस्था गरेकाेप्रति उहाँले आक्रोस व्यक्त व्यक्त गर्नुभयाे ।
‘अहिले नारायणी हस्पिटमा ३ जना कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन्, अब २ वा ३ जना अझै भए उनीहरुलाई कहाँ राख्ने ?’ मेयर सरावगीले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयाे ।
सरकारी अस्पताल तयार नभएको अवस्थामा नीजि अस्पतालमै भएपनि एउटा पिसिआर मेसिनको व्यस्था गरी काेराेना विशेष हस्पिटल वीरगंगमा स्थापना गर्नुपर्ने पनि उहाँकाे सुझाव छ ।
प्रदेश सरकारले वीरगंजमा काेराेना हस्पिटल स्थापना नगरेपनि तोकिएको बारा र जलेश्वरकै हस्पिटल तयार गरे यहाँका कोरोना संक्रमितलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नत्र सुविधा सम्पन्न तथा मेडिकल टिमको हब समेत भएको वीरगंजमै कोभिड हस्पिट तयार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयाे ।
प्रदेश सरकारले गर्न नसके आफूलाई पनि उहाँले बताउनुभयाे । ‘प्रदेश सरकारले गर्न नसके हामीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो, हामी यहाँ भोली देखि नै नीजि अस्पतालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिई काेराेना हस्पिटल सुरु गर्छाैँ, ‘उहाँले भन्नुभयाे ।